लाईफस्टाइल​ | Digital Dainik | Page 10
शरिरलाई हानिकारक गर्ने खानेकुराहरु यस्ता छन्
शरिरलाई हानिकारक गर्ने खानेकुराहरु यस्ता छन् काठमाडौं, साउन १४: मानिसहरुको 'स्वास्थ्य नै धन हो' । मानिसहरु हरेक काम गर्दा पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनु पर्छ । आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न हामीले खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामीहरु हरेक दिन खाने विभिन्न खानेकुराहरु पनि हानिकारक हुने गर्दछ । जसले हाम्रो शरिरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। हामी यहाँ ती खानेकुराहरुको बारेमा चर्चा गर्दछौं जसले हाम्रो शरिरमा हानिकारक प्रभाव प्रार्दछ । १. प्याक गरिएका चिप्स: प्याक गरिएका चिप्सहरुमा हानिकारक कम्पाउन्ड पाइने गर्दछ जसले क्यान्सरको खतरा बढाउन सक्छ । चिप्सहरू उत्पादन गर्दा बढी तापक्रममा भुट्ने तथा पकाइने गरिन्छ …
रक्त समुहले थाँहा पाउन सकिन्छ मानिसको ब्यक्तित्व
रक्त समुहले थाँहा पाउन सकिन्छ मानिसको ब्यक्तित्व काठमाडौं, साउन ८ : मानिसहरुको रक्त समुहले पनि उनीहरुको ब्यक्तित्व थाँहा पाउन सकिन्छ। एक जापानी संस्थाले गरेको अनुसन्धान अनुसार रक्त समुह अनुसार मानिसहरुको ब्यक्तित्व पनि फरक-फरक हुने देखाएको छ । रक्त समुह 'ए': यो रक्त समुहका मानिसहरु सदभाव, शान्ति मन पराउँछन् । यी समुहका मानिसहरुसँग सबैसित मिलेर राम्रोसँग काम गर्न सक्ने खुबी रहेको हुन्छ। यो समुहका मानिसहरु सम्बेदनशील, स्नेही, दयालु स्वभाबका रहेका हुन्छन् । यो समुहका मानिसहरुको कमजोरी भनेको चुप लागेर बस्न नसक्नु हो । रक्त समुह 'बी': यो रक्त समुहका मानिसहरु केही फरक प्रकृतिका हुन्छन् । जसको आफ्नै फरक बाटो …
यसकारण हातले खाना खानुहोस्
यसकारण हातले खाना खानुहोस् काठमाडौं, असार २८ : नेपाली समाजमा अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ । मानिसहरु आधुनिक तरिकाले जीवनयापन गरिरहेका छन् । मानिसहरुको लगाई, खुवाइ रहनसहन सबै बदलिँदै गएको हामीले महशुस गरेका छौं । मानिसहरुको खानेकुरा खाने शैली देखि अन्य कुराहरुमा पनि परिवर्तन आएको छ । पहिले मानिसहरु खानेकुरा हातले खान्थे भने आजकाल चम्चा तथा काँटाको प्रयोगले खानेकुरा खाने गर्दछन् । कोही मानिसलाई चम्चा तथा काँटाले खानुभन्दा हातले खाँदा अलग्गै आनन्द मिल्ने बताउँछन् भने कोही चम्चा तथा काँटाले खानुमै आनन्द मान्छन् । अध्ययनले जनाएअनुसार विश्वभरको तत्थ्याङ्क हेर्ने हो भने धेरै जसो …
स्वास्थ्यका दुष्टिले विवाह गर्नु फाईदा
स्वास्थ्यका दुष्टिले विवाह गर्नु फाईदा काठमाडौं, असार १ : एक अध्ययनले विवाह गर्नु मानिसको स्वास्थ्यमा फाईदाजनक हुने देखाएको छ। युनिभर्सिर्टी कलेज अफ लण्डनले गरेको एक अनुसन्धानले विवाह पुरुषको स्वास्थ्यका अझ बढि फाइदाजनक हुने देखाएको हो। सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको मानिसले पुनः विवाह गरेमा समेत उसको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले दाबी गरेका छन्। अविवाहित मानिसको भन्दा विवाहित मानिसको स्वास्थ्य राम्रो हुने तथा आयु पनि लामो हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। सन् १९५८ को मार्च महिनामा जन्मिएका ९ हजार जना बेलायत बासीमा यस अध्ययनमा उनीहरुको मस्तिष्क तथा …
केरा खानुका ६ फाईदाहरु
केरा खानुका ६ फाईदाहरु हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई फाईदा पुगोस भनेर दिनहुँ बिभिन्न किसिमका फलफूलहरु खाने गर्दछौं। यसरी खाईने फलफूल मध्ये धेरै प्रयोग गरिने केरा पनि एक हो। हामी सामान्य विरामी परेर डाक्टरको जाँदा समेत औषधी सँगै फलफूल पनि खाने सुझाब दिने गर्दछन्। तसर्थ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि केरा पनि एक फाईदाजनक फलफूल हो। यँहा केरा खानुका ६ फाईदाहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ : १.तनावमा कमी ल्याउन : अहिले मानव जीवनमा तनाव एक हिस्सा नै भैसक्यो। मानसिक रुपमा विचलित भइरहेको समयमा सेरोटिन नामक तत्वको कमी हुन्छ। केरामा ट्रिप्टोफेन अधिक मात्रामा पाईने गर्दछ जसले सेरोटिनमा बदलिएर …
पहिलो गीतमै चुमिन सोमेयाले लोकप्रियता (गीतको मेकिङ भिडियो सहित)
पहिलो गीतमै चुमिन सोमेयाले लोकप्रियता (गीतको मेकिङ भिडियो सहित) काठमाडौं, बैशाख ५ : ‘त्यो पारी डाडामा हेर घाम लाग्यो घमाईलो, लाग्यो मलाई रमाईलो, तिमि र घुम्न जाऊ न..... तिमि र म घुम्न जाउ न....... अनि घामले मलाई सताउला, काली मलाई बनाउला, तिमि पिरतीको छाता ओडाउन......’ धेरैको ओठमा आजभोली झुण्डिएको गीतको बोल हो यो । राजधानीका नाईट क्लव, रेष्टुरेन्टदेखि युवादेखि बुढाबुढिसम्मको मोवाईलमा यो गीत घन्किन्छ । ठट्यौली शैलीको यो गितको शब्द जति मिठास छ त्योभन्दा बढि यसको स्वर जादुमय छ । टिनेजर पनि पार नगरेकी नव गायिका सोमेया बराइलीलाई यो गीतले अहिले उचाईमा पु-याएको छ । १९ बर्षको उमेरमै यो गीतबाट सोमेयाको फेसबुक पेज र टुइटर फलोअर 'ओभर नाईट' हत्तै …
के पिउँछन् यी प्रख्यात नेताहरु
के पिउँछन् यी प्रख्यात नेताहरु बाराक ओबामा बाराक ओबामाको चुरोट पिउने लतबारे सबैलाई थाहा छ । किशोर अवस्थादेखि नै चुरोटको लतमा डुबेका उनी अझै यसबाट उम्किन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति बनेपछि जथाभावी चुरोट खान नपाउने भएकाले, उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भएका बेला निकोटिनमिश्रित चुइंगम चपाउने गरेका छन् । चुरोटपछि उनको अर्को अम्मल हो, बियर । पार्टीहरुमा उनले बियरबाहेक अन्य ड्रिंक हत्तपत्त छुने गरेका छैनन् । एन्जेला मर्केल जर्मनीमा सबैभन्दा लोकप्रिय पेय पदार्थ हो, बियर । जर्मनीमा हरेक बर्ष हुने बियर महोत्सवमा सहभागी हुन संसारभरिबाट मानिस पुग्ने गरेका छन् । त्यसै देशको नेतृ भएकाले …
कुन उमेरको मानिस कति घण्टा सुत्नु राम्रो
कुन उमेरको मानिस कति घण्टा सुत्नु राम्रो काठमाडौं, चैत ३ : संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय निद्रा फाउण्डेशनले गरेको अनुसन्धानमा जनाए अनुसार विभिन्न उमेरका मानिसहरुको निद्राको आवश्यकता पनि फरक हुने गर्छ । हामीहरु प्रायले आफूलाई पर्याप्त निद्रा पुगेको नपुगेको सहजै थाहा पाउछौं तर पर्याप्त निद्रा कति हो भन्ने कुरा अमेरिकामा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले भनेको छ । त्यो पनि मानिसको उमेरमा भर पर्छ । निद्रा विषयमा अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्था न्याशनल स्लीप फाउण्डेशनका अनुसार व्यक्तिको निद्राको आवश्यकता उस्को जीवनशैलीमा आधारित हुने गर्छ । नवजात शिशुहरुलाई अरु उमेरका मानिसभन्दा बढी निन्द्राको …
यी ६ काम भुलेर पनि नगर्नुहोस्, यस्तो गर्दा तपाई जवानीमै बुढो बन्नुहुनेछ
यी ६ काम भुलेर पनि नगर्नुहोस्, यस्तो गर्दा तपाई जवानीमै बुढो बन्नुहुनेछ काठमाडौं, फागुन २७ : स्वास्थ्य नै सबै भन्दा ठूलो धन हो, मानिस स्वस्थ छ भने त्यो नै सबै भन्दा ठुलो धन हो । मानिससँग जति नै पैसा वा सम्पति किन नहोस् उसको स्वास्थ्य ठिक छैन भने त्यसको कुनै मतलव हुँदैन । हिन्दु शास्त्रअनुसार स्वास्थ्यलाई धन भन्दा पनि बढी महत्व दिने गरिन्छ, किनकि खराब स्वास्थ्यले तपाइँको आर्थिक अवस्था नै बिगार्न सक्छ । त्यसैले राम्रो स्वास्थ्यको लागि सबै भन्दा जरुरी हुन्छ नियमित र सुनियोजित जीवनशैली । जसको दिनचर्या नियमित हुँदैन ऊ समय भन्दा पहिले नै बुढो देखिन्छ । यसैले शास्त्रमा केहि कुरा भनिएको छ जसको ध्यान राखेर मानिसले आफ्नो उमेरभर जवान बनिरहन …
एक हप्तासम्म नुन नखाँदा तपाईंको शरीरमा हुने आश्चर्यजनक परिवर्तन
एक हप्तासम्म नुन नखाँदा तपाईंको शरीरमा हुने आश्चर्यजनक परिवर्तन काठमाडौं, फागुन २२ : एक हप्तासम्म नुन नखाँदा तपाईंको शरीरमा आश्चर्यजनक परिवर्तन हुने बताइएको छ । नुन नखाँदा तपाईं लामो समयसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ । धेरै नुन खाँदा ब्लडप्रेसर बढ्ने गर्दछ जुन बढिरहेको उमेरका लागि राम्रो होइन । त्यसकारण एक हप्तासम्म नुन नखाँदा तपाईं स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ उन्मुख हुनु हुनेछ । तपार्ईंको खानामा नुनको मात्रा कम गर्दा हुने फाइदाहरु यसप्रकार रहेका छन् । १. यसले शरीरलाई सन्तुलित राख्ने गर्दछ : अत्यधिक नुनको प्रयोगले शरीरको सन्तुलन बिग्रने गर्दछ । त्यसकारण एक हप्तासम्म खानामा नुनको मात्रा हटाउँदा तपाईंको स्वास्थ्यमा निकै धेरै …